Nageellee Booranaa: 'Obboleessa koo jaarsa ganna 65 mana keessatti ajjeesan'' - BBC News Afaan Oromoo
Godina Gujii Bahaa, Aanaa Liiban Ganda Simintoo Ardaa Dhuungootti waraana Liyyuu Poolisiin Naannoo Somaalee, horsiisee bultoota daangaarra jiran irratti bananiin namoonni torba ajjeefamuu isaanii BBCn maddeen garagaraa irraa mirkaneefateera.
Namoonni jaha kan biraa ammoo balaadhuma kanaan madaa'uun wal'aansa irratti akka argaman maddeen mirkaneessaniiru.
Namoota balaa kanaan lubbuunsaanii darbe jaha har'a ganama sirni awwaalchaa isaanii raawwateera.
Kanneen ajjeefaman keessaa tokko miseensa poolisii Oromiyaa ta'uusaa hospitaala Waliigalaa Nageellee Booranaarraa mirkaneefanneera.
Namoota waraana kanaan lubbuun isaanii dabre keessattis maanguddoon ganna 70 fi 65 akka argamani BBC'n maddeen isaarraa hubateera.
Jiraataa Nageellee Booranaa kan tahe Mallicha (maqaansaa kan jijjiirame), ''Liyyuu poolisiin naannoo Somaalee konkolaataa saddeetiin dhufuun, uummata horsiisee bulaa irratti dhukaasa baneera,''jedha.
''Osoo jarri loon isaanii tikfachaa jiruuti Liyyuu poolisiin dhufuun nama galaafattee kan deemte,'' jechuun gadda waliin ibsa.
Obboleessi isaa haaluma kanaan kan jalaa du'e, Aabba Jaarsoo Qoyyee Jaarraa wayita bilbilaan haasofsiifneetti Ardaa Funnaan Agarsuutti namoota jaha awwaalaa jiraachusaanii nutti himaniiru.
''Obboleessa koo jaarsa ganna 65, Jorree Qoyyee Jaarraa, mana keessatti ajjeessan,'' jechuun haala du'aatii obboleessa isaanii BBCtti hime.
Kana malees, namoota liyyuu poolisiin kaleessa ajjeefaman keessaa jaarsi ganna 70 jiraachusaanii dubbataniiru.
''Abbaan koo osoo daandiirra deemanii rasaasaan ajjeefaman''
Aabba Jaarsoo dabaluun, ''Raayyaan waraanaa biyyaa osoo gama kanaan jiruu, gama saniin nama fixan,'' jedhu. ''Osuma nuti wal lolaa turretti, [raayyaan ittisa biyyaa] dhufe. Nu dhowwe,'' jedhe.
Bulchaa Aanaa Liiban Aabba Waariyoo Goollichaa sababa maaliif akka irra deddeebiin waraanni naannawa Booranaatti banamuun lubbuun namootaa hedduu dabru gaafanne, 'sababni isaa sabab daangaati. Erga ciminaan jalqabe ji'a sagal guuteera,'' jedhaniiru.
Gidduutti nagaa fakkaatee tasgabbaa'uus ammammoo 'bifa haaraan' jalqabuusaa dubbatu.
Raayyaan nu hineegne
Aabba Waariyoo Goollichaa dabaluun waan jedhan, 'raayyaan waraanaa achi kan gahan erga loolli banamuun namoonni ajjeefamanii booda.''
Akka jecha Aabba Jaarsoo Qoyyeetti garuu, lola gidduutti lubbuun namootaa darbaa wayita jirutti, raayyaan biyyaa achi gahuun gargar isaan dhorkeera.
''Akka yaada kiyyaatti raayyaan biyyaa waan tokkoyyuu nu gargaaraa hin jiru.''
Akka isaan jedhanittis, erguma raayyaan dhufuun gidduu galanii boodadha kan namni kunneen ajjeefaman.
Kana malees, warri lubbuu namaa galaafatanis osoo itti hin gaafatamiin 'nagaan gara irraa dhufanitti deebii'uu isaanis nutti himan. 'Akka nama nagaa ofirraa gaggeessanii, nagaan galchan,'' jechuun aariisaanii ibsataniiru.
Reeffa namootaallee akka hin fudhanne alaabaa fuuldura isaanii qabuun dhowwaa akka turanis dabaluun BBC'tti himaniiru.
Sababuma kanaanis, 'akka malee boonyee gaddineerra,'' jedhus.
Kanuma qulqulleefachuufis 'raayyaan ittisa biyyaaa osoo jiruu maaliif uummanni nagaa du'aa?' jedhuun gaafachuuf Komaandara ajajaa kora bittineessaa naannoo Nageellee Booranaa kan ta'an bilbillee, isaanis erga gaaffii keenya dhagahanii booda bilbila isaanii addaan kutaniiru. Deddeebiisnee bilbillus hin milkoofne.
Gama naannoo Somaaleetiinis waa'ee kana qulqulleeffachuuf yaaliin taasifne nu milkaa'uu hin dandeenye.
Yeroo dabres, Godina Booranaa Aanaa Dirree, iddoo Sooddaa jedhamutti walitti bu'insa hawaasaa fi miseensota raayyaa ittisa biyyaa gidduutti uumameen, yoo xiqqaate namoonni sadii lubbuun isaanii darbeera.
Kanumaanis miseensonni raayyaa biyyattii ajjeechaa kana raawwatan 'osoo itti hin gaafatamiin' gara naannoo Somaaleetti cehuunsaanis hubatameera.